निफ्टी हूपर बास्केटबल 🥇 क्रिएटिव परेड ▷ 🥇
निफ्टी हूपर बास्केटबल
अघिल्लो खेल: जीपी स्की स्लामम
जीपी स्की स्ललाम जीपी स्की स्ललाम एक HTML5 खेल खेल हो। पिस पूरा गर्न ढोका मार्फत जानुहोस् [...]
अर्को खेल: च्याम्पियन्स स्लट
चैम्पियन्स स्लट चैम्पियन्स स्लट एक HTML5 क्यासिनो खेल हो। यस स्लट मेसिनको साथ आफ्नो भाग्य प्रयास गर्नुहोस् [...]
के तपाईलाई बास्केटबल मन पर्छ? के तपाईंले कहिल्यै आफ्नो सपनाहरूको टीमसँग विश्व च्याम्पियनशिप जित्ने सपना देख्नुभएको छ? खेल सुरु हुन्छ, तपाईंको मौका यहाँ छ! १ different बिभिन्न देशहरू मध्ये एउटा छनौट गर्नुहोस् र तपाईंको विरोधीहरू विरुद्ध खेल्नुहोस् समय सकिनु अघि तपाईंले पर्याप्त अ points्क प्राप्त गर्नु पर्छ। जब सूचक हरियो क्षेत्र मा रहन्छ, स्क्रिन छुनुहोस् र बास्केटबल फाल्नुहोस्। यदि कसैले तपाईंलाई रोकिरहेको छ भने, तपाईं गोलाकार क्षेत्रमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ बाधा पाउन। तपाईंको सटिक शटहरूको साथ नेटहरू तोड्नुहोस् र तपाईंको टीमसँग वर्ल्ड बास्केटबल च्याम्पियनशिप जित्नुहोस्। १ nations राष्ट्रहरू मध्ये एक छनौट गर्नुहोस् र देखाउनुहोस् यदि तपाईंसँग के च्याम्पियन बन्नको लागि लिन्छ भने।
# आर्केड# बास्केटबल# html5AndroidCarrerasसेलिब्रेटीचिकोखेलबचाउनुहोस्भौतिकीकौशलसुरुवात गर्नुहोस्मोबाइलबच्चाहरुबाधाबलसमय